'Sekusele kancane uManyisa ajoyine iDowns' | News24
'Sekusele kancane uManyisa ajoyine iDowns'
Johannesburg - Ukaputeni we-Orlando Pirates u-Oupa Manyisa uzojoyina iMamelodi Sundowns kule nyanga, ngokusho kombiko weSABC.
Usihlalo wePirates u-Irvin Khoza kanye nesikhulu seDowns uPatrice Motsepe kubikwa ukuthi kumanje baxoxisana ngemali azothengiswa ngayo lo mdlali.
Funda nalolu daba: 'IKaizer Chiefs iyiBayern Munich yaseMzansi.'
Imenenja yalo mdllai uThabo Moloto ucashunwe ethi: "Njengamanje izikhulu zibambe izingxoxo ngalo mdlali. Kodwa okwamanje kubukeka sengathi konke sekusele kancane ukuba uManyisa ajoyine iMamelodi Sundowns ngaphambi kokuvalwa kwesikhathi sokuthengwa kwabadlali.”
UMoloto uqhube wathi: “UManyisa ujabulile ngenxa yezinto esezizuzile ne-Orlando Pirates. Wanqoba izinkomishi ezintathu amasizini amabili elandelana. Ngakho ujabukle kakhulu ngokujoyina iMamelodi Sundowns.”